WTTC sy WTN dia miaro ny fanafoanana ireo patanty amin'ny famokarana vaksin COVID-19 | Vaovao momba ny fahasalamana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Teknolojia fitsangatsanganana • Travel Wire News
WTTC sy WTN dia miaro ny fanafoanana ireo patanty amin'ny famokarana vaksinin'ny COVID-19
WTCC dia miaro ny fanafoanana ireo patanty amin'ny famokarana vaksinin'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fahasalamana » WTTC sy WTN dia miaro ny fanafoanana ireo patanty amin'ny famokarana vaksinin'ny COVID-19
Ny firenena manankarena dia miatrika fanerena bebe kokoa hizara teknolojia sy zon'ny mpamokatra vaksinina any amin'ny firenena mahantra sy antonony
Ny fandraisana anjara amin'ny famonjena ain'olona an-tapitrisany dia kofehy iraisan'ny antso manerantany ho amin'ny hetsika
Nilaza ny Globalista fa ny fahazoan-dàlana rehetra dia tokony misy fepetra manome alalana an'i Etazonia hanome alàlana ny fizarana teknolojia amin'ny WHO
Ny vaksiny eran-tany miaraka amin'ireo vaksiny tsara indrindra dia fiarovana tsara indrindra amin'ny fampandrosoana ireo karazana vaksinin'ny coronavirus
Tonga izany satria ny firenena manankarena dia niatrika faneren'ny fitomboan'ny World Travel and Tourism Council sy ny World Tourism Network, ary ny World Health Organization (OMS) hizara teknolojia sy zon'ny mpamokatra vaksinina any amin'ny firenena mahantra sy antonony.
Tamin'ny vao nofaranana WTTC Fihaonana an-tampony tany Cancun, Mexico, tsy nisy ny fifanakalozan-kevitra ampahibemaso momba ny toe-javatra mahatsiravina nitranga tany India, saingy naka tahaka izany i CEO Gloria Guevara ary nanadinadina an'i Manuel Santos, izay nanao sonia niaraka tamin'ny olona 170 hafa hanery ny filoham-pirenena amerikana Biden hanokatra fameperana ny patanty, mamela ny vaksininy hahatratra ny firenena an-dàlam-pandrosoana.
Ny filoha Biden dia efa nilaza teo aloha hoe "Tsy misy olona voaro raha tsy milamina ny rehetra." Tsy maintsy ataontsika izao.
Ny fandraisana anjara amin'ny famonjena ain'olona an-tapitrisany dia kofehy iraisan'ny antso manerantany ho amin'ny hetsika. Ohatra iray amin'izany ny fahitana ny fampandrosoana ny vaksinin'ny US Moderna, izay novolavolaina niaraka tamin'ny NIAID ary nahazo $ 2.5bn tamin'ny famatsiam-bolan'ny governemanta.
Moderna, miaraka amin'ireo mpanamboatra vaksinina telo hafa any Etazonia izay mampiasa ny haitao avy amin'ny governemanta, dia mbola tsy manana fifanarahana fahazoan-dàlana amin'i Washington amin'izao fotoana izao.
Nilaza ny Globalista fa ny fahazoan-dàlana rehetra dia tokony misy fepetra manome alalana an'i Etazonia hanome alàlana ny fizarana teknolojia amin'ny WHO hanampy amin'ny fampiroboroboana ny famokarana eran-tany; ary asio fepetra takiana amin'ny vidiny mora azo manerana an'izao tontolo izao.